POTATO KRASA: SHARAXAADA KALA DUWAN, ASTAAMAHA, SAWIRADA - BEER CAGAARAN
Baradhada Krasa waxaa si ballaaran looga dalbaday beeraleyda, sababtoo ah dhalidda iyo wax soo saarkooda, tayada ilaalinta fiican, iyo sidoo kale dhadhan fiican.
Waxaad kala socon kartaa kala duwanaanshahan iyada oo la adeegsanayo maqaalkeena, maxaa yeelay waxaan kuu diyaarinay sharaxaad ku saabsan sawirada, sifooyinka ugu muhiimsan iyo astaamaha farsamada beeraha. Iyo sidoo kale oo dhan ku saabsan sifooyinka cudurada iyo jabinta cayayaanka.
Baradhada Krasa ayaa iska leh noocyo dhexdhexaad ah, sababtoo ah xilligeeda Bisaylku waa 80 ilaa 100 maalmood. Waxaa lagu kori karaa dhammaan gobollada Ruushka. Kala duwanaanshaha cagaaran Krasa waxaa lagu gartaa dhadhan fiican iyo sifooyinka sare ee badeecooyinka xididka ah. Baradho miisaankan waxaa lagu gartaa dhalidda sare..
Waxay si fudud u dulqaadaneysaa abaar iyo waxyeelo farsamo oo kala duwan, sidoo kale waxay muujinaysaa iska caabin badan oo loo geysto dhammaan cudurada la yaqaan. Tan ugu fiican ee dhammaan khudraddan waxay ku kori doontaa ciidda iftiinka leh neefta wanaagsan. Kala duwan Tani waxaa lagu gartaa ay duurka xooggan oo xoog leh qayb adag oo xoog leh. Waxay ku daboolan yihiin caleemo cagaaran waxayna leeyihiin dawooyinka dhexe ee dhexdhexaadka ah. Nooc kasta wuxuu caadi ahaan ka kooban yahay 6 ilaa 8 digriiga.
Baradhada Krasa: sharaxaadda kala duwan
Magaca dugsiga Beauty
Sifooyinka guud bartamihii dhexe ee baradho ah ee roodhida Ruushka, si fiican loogu habeeyey ciidda iyo cimilada, waxay siinaysaa dhalid deggan
Wakhtiga uurka 80-100 maalmood
Mawduucyada Starching 15-19%
Dad badan oo digriiga ganacsiga ah 250-300 gr
Tirada digriiga duurka 6-8
Tayada macaamilka dhadhan fiican iyo dhadhan fiican, oo ku fiican shiilashada iyo dubista
Soo kabashada 95%
Midabka maqaarka casaanka
Gobollada la doorbido mid kasta
Cadaadiska cudurada adkaysi u ah dhammaan cudurada fangas
Noocyada sii kordhaya tiknoolojiyada beeraha
Asalka agrofirm "Sedek" (Ruushka)
Potato Krasa waxay leedahay digriiga oval, miisaankoodu wuxuu u dhexeeyaa 250 illaa 300 garaam. Waxay ku daboolan yihiin diirka jilicsan ee midab cas oo leh indhaha yaryar, taas oo ay ku jirto qoyaan leh kareem leh qulqulka cuntooyinka nuurkoodu sarreeyo.
Baradhada Krasa waa noocyo kala duwan oo ah taranta Yurub, kaas oo laga tagay qarnigii 21I.
Waxaad isbarbardhigi kartaa nacnacaadka leh noocyo kale iyada oo la isticmaalayo xogta jadwalka hoose:
Fiiri hoosta: sawirta barafka Krasa
Noocyada koritaanka iyo kaydinta
Beeridda baradhada abuurka Krasa ku saabsan geedo la qaaday bishii Febraayo ama horraantii Maarso. Ka hor inta beero, miraha u baahan tahay in lagu qoyo laba maalmood biyo. Wixii geedo sii kordhaya waa inay diyaariyaan ciidda gaarka ah, kaas oo ka kooban hal qayb oo ka mid ah ciidda iyo afar qaybood oo ah peat leh Bacriminta adag.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo abuuro baradhada, goorta iyo sida loo dalbado Bacriminta, kuwaas oo kuwa ugu fiican, sida loo sameeyo si haboon marka la beerto.
Faafi abuurka waa in la qaybiyaa dhulka oo ku rusheeyaa ciid. Heerkulka ugu wanaagsan ee geedo dhalidda waa heerkul ah 20 ilaa 24 darajo Celsius. Xilliga dayrta, mid waa in uu qodo ciidda xayndaab ee majarafad ah iyo soo saaro Bacriminta oo adag. Masaafada u dhaxaysa safafka baradho waa inay ahaataa 60 ilaa 70 sentimitir.
MUHIIM! Qoto dheer oo ah 10 sentimitir, dhulku waa inuu kululaa ugu yaraan 8 digrii Celsius.
Qiyaas ahaan todobaad ka hor beerashada, digriiga baradho waa in lagu meeleeyo meel diiran. Marka laga beerto digriiga waxaa lagula talinayaa inay sameeyaan nitrophore.
Marka ugu horeysa beerashada beerta waa in aan la waraabin, tan iyo intii muddadaas nidaamka xididka of geedaha la dhigay. Si kastaba ha noqotee, waraabinta xiga waa inay noqotaa mid joogto ah.
Sida ugu dhakhsaha badan aad ku ogaan caleemaha ugu horreeya, hubi inaad ku quudiso dhirta leh nitrogen-bacriminta iyo Bacriminta potash. Goynta waxaa badanaa la sameeyaa horraantii Agoosto.
Sida farsamooyinka agrotechnical, kuwa ugu caansan waxaa loo isticmaali karaa: hills manually ama iyada oo ay ka caawiyaan socodka ka dambeeya tractor, mulching, waraabiyo.
Baradkan waxaa lagu kaydiyaa si fiican, gaar ahaan xaaladaha oo dhan.
Laga soo bilaabo qoraallada boggayaga waxaad ku baran doontaa faahfaahin ku saabsan waqtiga iyo heerkulka kaydinta, dhibaatooyinka suurtagalka ah iyo shuruudaha laga abuuro dukaamada cuntada.
Iyo sidoo kale ku saabsan sida loo kaydiyo baradho xilliga qaboobaha, ee aqalka iyo miiska, on balakoonka iyo sanduuqyada, qaboojiyaha iyo foomka diirran.
Tayada fasalkan waa 95%.
Iyada oo tayada ilaalinta noocyo kale waxaad ka arki kartaa jadwalka hoose:
Magaca dugsiga Soo kabashada
Timo 96%, laakiin digriiga ayaa hore u soo gurguhu
Baradho Krasa uma aha mid u nugul cudurrada iyo cayayaanka, si kastaba ha ahaatee, waxaad samayn kartaa daaweyn ka hortag ah dhirta leh fungicides iyo sunta cayayaanka.
Sidoo kale, waxaad noqon kartaa macluumaad wax ku oolsan oo ku saabsan cudurrada ugu badan ee habeenkii ah: Alternaria, dillaac, Fusarium, qolof, kansar, verticillis.
Iyo ku saabsan cayayaanka: Colorado baradho baradho, medvedki, aboorka baradho, wireworm.
Daryeelka habboon ee baradho ah ee noocyada kor ku xusan waa la damaanad qaaday in ay ku siiyaan Goosashada hodan ah ee khudradda xididdo delicioustaas oo aad labadiinaba u isticmaali kartid isticmaalka shakhsiga iyo iibka.
Akhri sidoo kale maqaalo xiiso iyo faa'iido leh oo ku saabsan sida loo beerayo baradhada: Tiknoolajiyada Dutch, iyada oo aan la jarin iyo hilling, cows, laga bilaabo abuur, bacaha, foosto, sanduuqyada.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiso u leedahay in ay ogaadaan in dalalka baradho yihiin ugu badan koray, kuwaas oo noocyo yihiin caan ah ee Russia, sida loo koro noocyo hore iyo sida loo rogo habkan loo galay ganacsi.
Hoos waxaa ku qoran mowduucyada kala duwan ee ku saabsan noocyada baradho ah ee kudheerta waqtiyada kala duwan:
Xilliga dhexe Gaar ahaan hore Dhaqdhaqaaqa-dillaac
Aurora Prince Black Nikulinsky
Dareemo Jacayl Cardinal
Ryabinushka Rabbi ee isdhaafka Kiwi